PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - ZIQHENYENI NGAMAGUGU ESIZWE
ZIQHENYENI NGAMAGUGU ESIZWE
Ilanga - 2017-09-07 - Relationships & Love Issues -
USEPTEMBER yi- heritage
month (inyanga yamagugu). Kungenzeka-ke ukuthi bakhona abangakwazi lokho, okungeyona into enhle.
Kufanele siqonde ukuthi ishoni le heritage month. Phela kuvamile ukuba sizazi izinto ngamagama kodwa singazazi ukuthi zisho ukuthini, njengayo nje le nyanga.
Lena-ke yinyanga yokuba sizinike isikhathi sijeqeze emuva lapho sisuka khona, sikhumbule zonke izinto ezingamagugu ethu. Phela indlela esiphila ngayo isishintshe kakhulu endleleni obekuphilwa ngayo endulo, ziningi izinto esezasala endleleni, esingasazenzi ezingamagugu.
Ngale nyanga-ke sithola ithuba lokuba sikhumbule ngesikhathi kusadliwa ngoludala. Ukushintsha nje kancane indlela yasentshonalanga yokugqoka, mhlawumbe uthi uma ugqokile kube nokuthile kwesintu okufakayo, kungaba ngenye yezinto ezikhombisa ukuziqhenya ngamagugu ethu.
Ukushintsha ukudla esikudlayo kwesilungu, sithi ukugxila kokwesintu, kungaba yindlela esingagubha ngayo le nyanga. Singayigubha futhi le nyanga ngokuphumuza kancane umculo wabasentshonalanga, sidlale owethu wesintu.
Ukubukela phansi izinto ezingamagugu kithi kuyinkomba yokuthi sikhohliwe wukuthi sisukaphi nokuthi singobani.